RCEP ကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆီးနိတ်အား ဖိလစ်ပိုင် ကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲ တိုက်တွန်း - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ Manila Bay တွင် နေဝင်ချိန်ကြည့်ရှုနေသူများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် ၃၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်ဖြစ်သော ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု (RCEP) အား အလျင်အမြန် အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆီးနိတ်အား ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်က တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုများ စုပေါင်းရရှိမှုပို အလေးထားသည့် ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကြီးကို အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆက်လက်နှောင့်နှေးနေမည်ဆိုပါက စီးပွားရေးအပေါ် မကောင်းသောသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်မည်ဟု ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Ramon Lopez က သတိပေးခဲ့သည်။
“RCEP ကို မချိတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပါဝင်ဖို့ နှောင့်နှေးခြင်းတွေက ဒီအရှိန်အဟုန်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ ပါဝင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ နိုင်ငံကနေ ရှောင်ရှားသွားကြလိမ့်မယ်” ဟု Lopez က ဆိုသည်။
RCEP သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာ ကွင်းဆက်များတွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးအား ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အား ပြောခဲ့သည်။ “ဒါက ရိုးရိုးကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးကွက်ရရှိရေးနဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒေသတွင်းရဲ့ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရှိမှုကို အသုံးဝင်စေရန် မဟာဗျူဟာမြောက် ကိရိယာလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Lopez က ပြောခဲ့သည်။
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများက RCEP အတွင်း နိုင်ငံအတွင်းမှ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ယှဉ်ပြိုင်သူများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသဖြင့် သဘောတူညီချက်အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် နှောင့်နှေးခြင်းသည် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကိုလည်း ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးအကြီးအကဲက သတိပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“RCEP က ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေးရဲ့အနာဂတ်အတွက် အမှန်တကယ်လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ကို ထိန်းထားပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက အမှန်တကယ်ကို ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ပေါ်ထွန်းစစီးပွားရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Lopez က ဆိုသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် အသက်မဝင်လာမီ ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလက RCEP သဘောတူညီချက်အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးရန် မအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေးက ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် RCEP အား အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး သဘောတူညီမှုရယူရန်အတွက် အထက်လွှတ်တော်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
RCEP အား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ၁၀ နိုင်ငံအပြင် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဩစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် နိုင်ငံများက ဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေနှင့် ပြည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လွှမ်းခြုံထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Philippine trade chief urges senate to ratify RCEP
MANILA, Jan. 25 (Xinhua) — The Philippines’ Department of Trade and Industry on Monday urged the country’s senate to quickly ratify the country’s membership in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), the world’s largest free trade deal.
Trade Secretary Ramon Lopez warned of the negative impact on the economy if the country continues to delay the ratification of the mega trade deal, emphasizing that the Philippines’ economic gains have accrued under globalization and free trade agreements.
“Not joining RCEP or delaying our participation will disrupt this momentum. Investments will shy away from the country not participating. There will be capital flight and lost investment opportunities,” Lopez said.
He told the legislature that RCEP would support the Philippines’ inclusion in global chains and improve economic efficiency. “It is not justasimple trade agreement that provides enhanced market access and stable business environment. It isastrategic tool to sustain the region’s economic advantage,” Lopez said.
The trade chief also warned thatadelay in ratification would hamper job creation and economic activity, as trade and investments would be diverted from the country to competitors within RCEP. Furthermore, excluding the trade bloc would erode the Philippines’ export competitiveness, he added.
“RCEP is really for the future of our economy. We have to sustain our growth momentum and show to the international community that the Philippines is indeed an emerging economy open to trade and investment,” Lopez said.
The Philippines failed to ratify the RCEP agreement in December last year before the free trade deal took effect on January 1.
In September 2021, Philippine President Rodrigo Duterte ratified the RCEP and brought it to the senate for concurrence.
RCEP is made up of 10 ASEAN members, as well as China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, covering about 30 percent of the world’s population and its gross domestic product. ■
Photo : People enjoy the sunset in Manila Bay along the baywalk in Manila, the Philippines on Aug. 31, 2020. (Xinhua/Rouelle Umali)